Kk Nokwelukiweyo Bag, Kk Rice Bag, Kk Nokwelukiweyo Fibc Bag - Jintang
Isikhwama Esilukiwe se-PP
Isikhwama Esiphrintiwe se-Offset Kanye neFlexo
Sangaphakathi Camera Bag
Emuva Seam Laminated Bag
Isikhwama Sokuphakelwa Kwesitoko
Isikhwama Sokudla Kwezilwane Ezifuywayo
Isikhwama Somanyolo WPP
Poly Nokwelukiweyo Sand Bag
I-Industrial PP Sack Sack
Poly Nokwelukiweyo Ukudla Bag
Isikhwama Sezolimo Esilukiwe se-PP
Isikhwama Semifino se-PP
Isikhwama se-Block Bottom Valve
Izikhwama ze-Block Bottom Valve
Izikhwama ze-Block Bottom Back
Vimba Isikhwama Esivulekile Ngezansi Esiphezulu
Vimba Isikhwama Sosimende Esingezansi
PP Nokwelukiweyo Putty Bag
PP Nokwelukiweyo ufulawa Bag
Isikhwama Sokudla se-PP
Isikhwama se-PP Block Bottom Valve
Isikhwama Esikhulu / Isikhwama Sejumbo
Isiyingi Jumbo Bag
Isikhwama se-U-pannel Jumbo
Isikhwama se-Baffle Jumbo
Indwayimane Jumbo Bag
Isikhwama se-PP Esilukiwe
Indwangu ye-PP Nokwelukiweyo
Izindwangu ze-PP Nokwelukiweyo
Sibekwe ngempumelelo phakathi kwabakhiqizi abaphezulu, abathumeli ngaphandle kanye nabahlinzeki BOPP Rice Bags. Lezi zikhwama zenziwa kusetshenziswa i-TOP esekhwalithi ephezulu (100% PP entsha) kanye nobuchwepheshe obuphambili. Izikhwama ezinikelwe zisetshenziselwa ukupakisha okusanhlamvu kwelayisi futhi zifunwa kabanzi kuwo wonke umhlaba. Amakhasimende ethu angazisebenzisa lezi zikhwama kithi ngemibala ehlukahlukene nosayizi kusuka ku-5 kuye ku-75 kgs ngokuya ngemininingwane yazo. Sinikeza lezi Zikhwama Zelayisi ze-BOPP ngemiklamo yokwakha brand ngentengo eyonga kakhulu kumakhasimende.
I-AD * STAR® ingumqondo wesaka owaziwayo wento eyimpuphu - isetshenziswa umhlaba wonke, enelungelo lobunikazi emhlabeni jikelele, futhi ikhiqizwa kuphela kwimishini ye-Starlinger. Amasaka alukiwe abunjwe ngezitini e-PP, akhiqizwa ngaphandle kokunamathiselwa ngokushisela ukushisa kwengubo yezindwangu, yathuthukiswa ngenqubo yokuzalisa nokufaka okuzenzakalelayo engqondweni. Njengomphumela wezimpawu ezibonakalayo kanye nenqubo ekhethekile yokukhiqiza, isisindo sesaka lesimende elingama-50 kg AD * STAR® singaba ngaphansi kwama-gramu angama-75. Isikhwama sephepha esinoqweqwe olulinganiselwa ku-3 sizoba nesisindo esingu-180 amagremu nesikhwama se-PE-film esingu-150 grams. Ukusetshenziswa okonga kwezinto eziluhlaza akusizi nje ukunciphisa izindleko.
I-Boda ingomunye wabakhiqizi abahamba phambili kanye nokuhlinzekwa kwezikhwama ezahlukahlukene zokudla kwebanga le-FIBC ezinamazinga omhlaba egumbi elihlanzekile, imishini eminingi kusengaphambili, i-laboratory yokulawula ikhwalithi ehlonyelwe phambili, abasebenzi abanolwazi kakhulu nobungcweti, futhi ivume ama-polymers ebanga lokudla eliphakeme nezinye izinto zokwengeza .
Singabantu ibhizinisi elikhulu lezimboni elikhiqiza izikhwama zekhwalithi ephezulu eNyakatho China.we zinamafektri amabili, okukhipha minyaka yonke kungaphezu kwezigidi eziyi-100 zamadola. Samukela ngokufudumele wonke amakhasimende enkampanini yethu ngokuthola izinkontileka.
Precision, Performance, kanye Nokwethenjelwa
Kusuka esikhwameni seBlock Bottom Valve kuya ezindwangu ezilukiwe ze-PP, imishini yethu ephathelene nokuthengisa inganikeza imikhiqizo ngekhwalithi engenakuqhathaniswa kunoma yiluphi uhlelo lokusebenza ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende.Xhumana nochwepheshe
Uhlaka lokweluka eliyisiyingi
Indawo Yokusebenzela Ukuthunga
Ithimba Lokuthengisa 1
UBoss Nethimba Lakhe
Umkhiqizo Oqokiwe Wesikhwama Esikhethiwe
Izinkampani Eziphezulu ezingama-20 Embonini Yepulasitiki
Umshini Wenkanyezi Yesikhangiso
Umthungo Osemuva (3)
IShijiazhuang Boda Plastic Chemical Co., Ltd. yasungulwa ngonyaka we-2003, futhi njengamanje inenkampani ephethwe ngokuphelele ebizwa nge-Hebei Shengshi Jintang Packaging Co, Ltd. Sinezimboni zethu ezintathu, imboni yethu yokuqala Ihlala ngaphezu kuka-30,000 square metres nabasebenzi abangaphezu kuka-300 abasebenza lapho. Imboni yesibili etholakala eXingtang, emaphethelweni edolobha laseShijiazhuang. Igama le-Shengshijintang Packaging Co., ltd. Ihlala ngaphezu kwamamitha skwele angama-45,000 kanye nabasebenzi abangaba ngu-300 abasebenza lapho. Ifektri yesithathu Ihlala ngaphezu kwamamitha skwele angama-85,000 nabasebenzi abangaba ngu-300 abasebenza lapho Imikhiqizo yethu eyinhloko ivalwe ukushisa
Ifektri yethu Ukuqinisekisa ikhwalithi Ezomnotho
Usizo lwethu 01
Usayizi wefektri (Sq.meters)
Sinezimboni ezintathu, eyokuqala ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-30,000, eyesibili ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-45,000, kanti eyesithathu ihlanganisa indawo engamamitha-skwele angama-85,000. Xhumana nathi
Ukusizakala kwethu 02
Sine uchungechunge lwemishini ethuthukile kusuka ku-extrusion kuya ekupakisheni. Sinemishini yokuhlola esezingeni elifanele ukuqinisekisa ukuthi ikhwalithi yomkhiqizo ihlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokuqinile.Xhumana nathi
Usizo lwethu 03
Ivolumu Yokuthengisa Yonyaka (Million US $): US $ 10 Million - US $ 50 Million Wokuthengwa Konyaka (Million US $): US $ 2.5 Million - US $ 5 Million. Xhumana nathi
izinyathelo zethu, ubuholi, ukungena, imikhiqizo
Abakhiqizi besikhwama seamente bahlaziya i-spec ...
Ngikhuluma ngamathemba entuthuko o ...
Indlela ukunweba ukuphila inkonzo b nokwelukiweyo ...
Ikheli: Eningizimu yeHexi Village, Chengzhai Town, Xingtang County, shijiazhuang, hebei.china
© Copyright - 2010-2020: Wonke Amalungelo Agodliwe. Imikhiqizo Okufakiwe, Ibalazwe
Isikhwama se-Block Bottom Valve, Kk Okuphakelayo Bag, Isikhwama se-Bopp Esinamanzi, Isikhwama Sokufaka se-Value Bottom Valve Cement, Kk Nokwelukiweyo Bag, Kk Samente Block Ngezansi Valve Bag, Yonke Imikhiqizo